WTN inopesana neWTTC paKuvakazve Kufamba uye Kuvhurazve Tourism
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Trending Now » WTN inopesana neWTTC paKuvakazve Kufamba uye Kuvhurazve Tourism
African Tourism Bhodhi • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hotera & Resorts • Kodzero Dzevanhu • LGBTQ • nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Pane chikonzero chakanaka nei Juergen Steinmetz, muvambi weWorld Tourism Network (WTN) achisiyana naGloria Guevara CEO weWorld Travel and Tourism Council (WTTC) nezvekuti uye sei kuvhura zvakachengeteka chikamu chekufamba. WTTC inomiririra makambani akakurisa uye ane simba kwazvo muindastiri. WTN inotarisisa iri yepakati uye diki saizi yekufambisa indasitiri makambani munyika. Masangano ese ari maviri chinangwa ndechekuvaka zvakare indasitiri yekufambisa neyekushanya zvakachengeteka uye zvinobatsira.
Vatungamiriri vevachangobva kusimbiswa World Tourism Network (WTN) zvisinei zvakasiyana muchikumbiro chakaziviswa naGloria Guevara, Mutungamiri & CEO we World Kufamba uye Tourism Council (WTTC) pamusoro pekuti mhinduro yekukurumidza inofanirwa kutaridzika sei sekuvhurazve indasitiri yekufambisa neyekushanya. WTTC inoda kuvhura mafambiro uye kushanya ikozvino, nepo WTN ichiti: "Mira!" Vaviri vanobvumirana pane kuchengetedzeka asi havabvumirane kana kumira kwekumisa nekuvharira miganhu nekukwanisa kuitwa zvakachengeteka.
Nezuro, Gloria Guevara akati: “Chikamu cheUK Travel & Tourism chiri muhondo yekurarama - zviri nyore. "Sezvo chikamu ichi chisina kusimba, kuunzwa kwevaeni nehurumende yeUK kunogona kumanikidza kuparara kweTravel & Tourism."
WTTC zvakare inochengetedza kuti kunyangwe paine mwedzi yekumanikidzwa kwega kwega mushure mekufamba, hapana humbowo hunoratidza kuti izvi zviri kushanda.
“Kunyangwe huwandu hwayo hwehurumende hunoratidza kugara kwavanhu hakuna kuratidza kuti kunobatsira mukuderedza kupararira kwe COVID-19. Kutapurirana kwevanhu munharaunda kuri kuramba kuchikonzera njodzi huru kupfuura kufamba kwenyika, ”akadaro Guevara.
"WTTC inotenda matanho akaunzwa nehurumende svondo rapfuura - humbowo hweyambowo-yekuenda COVID-19 bvunzo, ichiteverwa nekuvharirwa kwenguva pfupi uye imwe bvunzo kana zvichidikanwa - inogona kumisa hutachiona munzira dzayo uye ichingobvumidza rusununguko rwekufamba zvakachengeteka, "Guevara akadaro.
Chinyorwa chakaburitswa na eTurboNews zuro kupomera WTTC kuti vawane kushuvira kubvunza kana "Kudzivirirwa kana bhizinesi ichifanirwa kuve chekutanga kukosheswa, zvakakurudzira mhinduro nemutauriri weWTTC Jeff Pole maakati:
“Hatigone kubvumirana newe eTurboNews iyo WTTC iri kuisa iyo indasitiri pamberi pekuchengetedzwa kweruzhinji sezvo izvi zvichimiririra chinzvimbo cheWTTC uye zvirevo. Takataura zvinogara zvichingoitika kuti kuchengetedzeka kwevanhu kunofanirwa kuve kwakanyanya kukoshesa. Asi isu hatitende kuti panofanirwa kuve negakava pakati pechengetedzo yeruzhinji uye kuvhurazve zvakachengeteka muganho wenyika dzese uye kutangazve kufamba kwenyika.
"Kurambidzwa kwekufamba uye / kana kuisa kwega kwevatakuri vane hutano hakufanirwe kudikanwa kana kuongororwa kwakanaka kwekuenda musati kwaenda, kupfeka masiki echiso kunosungirwa, uye kuchengetedzwa kwakasimba uye hutsanana zvinoteverwa. Kuitwa nekukurumidza kwemajekiseni, kunyanya kune vanotambura, kunobatsirawo zvishoma nezvishoma kudzikisa kukanganisa kwakaipa kweECOVID-19. ”
Juergen Steinmetz, muvambi weWTN, akati: “Zvinotenderwa kuongororwa vasati vasvika uye kupatsanurwa kwave kwakajairwa kwenzvimbo dzinoverengeka dzekushanya nekushanya, kusanganisira imba yangu muno muHawaii. Kubvira State yangu payakatendera vashanyi kudzoka muna Gumiguru 15, pakave nekuwedzera kwezviitiko nekufa.
"Tichitarisa matanho akasimba ekusvika eSychelles akaitwa neIsrael, chiyero chakadai hachishande zvachose. Mhedzisiro mhedzisiro inoisa iyo Republic yeSeychelles mune yakashata hutano mamiriro maererano neCOVID-19.
Seychelles ikozvino inobvumira vashanyi kuti vauye kubva chero kupi pasi pano vaine mushonga weCOVID. "Iyi inogona kunge iri nzira inogamuchirwa kumberi", akadaro Steinmetz.
“UK haisi yega. Vatungamiriri vazhinji veEU vanoona njodzi uye vari kuwedzera zvirambidzo. Matanho akaomarara akadaro haafanire kuparadzwa neiyo pfupi-yenguva yekuda indasitiri yeTravel & Tourism uye kuisa vanhu munjodzi. Kunyangwe kana nyaya dzikasununguka, Kufamba neKushanya kwaisazoita zvemashiripiti kudzoka husiku. Kuvimba kwevatengi ndiko kiyi.
“Nemhando itsva yeutachiona irikupararira muUK, South Africa, Brazil, uyezve mune dzimwe nyika, kusanganisira United States ine nyaya mbiri dzichangobva kuwanikwa nanhasi muno muHawaii, izvi zvinoita kuti dzidziso yeWTTC ive yekuyedza kukuru uyo haafanire kuvaraidza panguva ino.
“Kunyangwe kuramba kurudziro yeWTTC kunogona kunge kuri kurova kwenguva pfupi kubhizimusi redu, tese tichakunda kana kwese kuenda kuchizarembera imomo kusvikira vanhu vazhinji vabayiwa jekiseni. Mushonga chete ndiwo unounza kuvimba kuvanhu uye woita kuti ufambe kufamba. Hapana chitupa, chitambi, utsanana, uye kushambadzira kunodhura hakutorere izvi. ”
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve World Tourism Network, boka rekukurukurirana nenhengo dzeVatambi neveVashanyi nyanzvi munyika zana nemakumi mashanu vanoenda